China Abavelisi bamaGumbi acocekileyo kunye nabathengisi | IVEN
Iprojekthi yegumbi elicocekileyo
Kwishishini lokuvelisa amayeza, elebhayoloji, elezonyango, eleemveliso zombane.
Umxholo weNkqubo yeGumbi elicocekileyo
Ukucoca igumbi lokuhombisa kunye nokuhombisa
Inkqubo yokuhlukanisa udonga olungenamda sisizukulwana esitsha sesisombululo sodonga lokucoca esenziwe sisiCoceko lwethu. Ubume eyodwa umngxuma kunye modular usifake indlela indibanisela ekhokelela kolu shishino ezisetyenziswa ngokubanzi biomedical, elektroniki kunye nezinye iinkalo.
Inkqubo yokungenisa umoya kwigumbi elicocekileyo i-IVEN isebenzisa izinto ezisemgangathweni ophezulu, kunye nesenzi sentsimbi ye-Siemens yamazwe aphesheya, iivevhe, kunye nomoya ojikelezayo ngerabha yeHUAMEI Brand enefoyile yeAluminiyam ukuqinisekisa ukogquma okuqinileyo kunye nokusebenza ngokutywina. Ngeli xesha, iqela lokufaka i-IVEN linamava ngaphezulu kwe-15 iminyaka yokufaka iiprojekthi, uhlala ugcina ubuchule bokufaka ngokugqibeleleyo.
Izixhobo zomoya (AHU)
Ukulinganisa amandla okonga kunye nokusebenza okuphezulu, ukhathalelo lwe-IVEN kakhulu kuyilo lwenkqubo yemeko yomoya elungileyo yomthengi. Sikhetha iMcQuay, TICA AHU, TRANE Chiller, njl ngokweemfuno zabathengi.
Inkqubo yemibhobho yomoya
Umbhobho wamanzi opholileyo
3.Umbhobho wamanzi opholileyo
Umbhobho wegumbi lomgangatho womoya
5.Ukuqiniswa kombhobho wamanzi
Inkqubo yombane kunye nezibane
Izixhobo zeprojekthi yegumbi elicocekileyo elinokukhanya okucwangcisiweyo okucocekileyo kunye nokutshintsha kwe-Nokia, iiyunithi zombane zeSchneider.
Inkqubo yokuLawula ngokuzenzekelayo
Umgangatho we-1PVC: France Gerflor, LG
Umgangatho 2.Epoxy: 4mm Self-sokulinganisa Epoxy Floor
IVEN Izibonelelo zeNkqubo yokuCoca igumbi
1.Sebenzisa iipaneli zesandwich ezisemgangathweni ophezulu kunye nezinto ze-BAO zensimbi.
Sinokuyila kwaye siphumeze iprojekthi yegumbi elicocekileyo
3.Uhlala usebenzisa indawo ephambili yentsimbi ye-TOP, enje nge Nokia, Schneider, Camfil, McQual, TRAIN njalo njalo.
4.Ngaphezulu konyaka we-15, iprojekthi ye-25 ibandakanya amava e-USA kunye neprojekthi yezakhono zokufaka.
Ukufakwa kweProjekthi kunye neqela lokuGunyazisa
Egqithileyo Iprojeki yokuvelisa umgca weSirinji yeProjekthi
Okulandelayo: Inkqubo yoNyango lwaManzi ye-RO
Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina,